हामी सबै सहमत हुन सक्छौं कि शरीर सौष्ठव एक व्यक्ति हो, विशेष गरी पुरुषहरूको दृष्टिकोण सुधार गर्ने उद्देश्यको सबैभन्दा पुरानो अभ्यास हो। जबकि सबैले जिमलाई फरक इच्छित परिणामको साथ हिट गर्दछ, एक साधारण डिनोमिनेटर त्यो हो कि प्रत्येकले राम्रो देखिन, थप फ्याटहरू जलाउन र थप मांसपेशि थप्न चाहान्छ। महिलाका लागि, आकर्षक महिला लुकको बहाली शरीर सौष्ठव पछि एक प्रमुख अपेक्षा हो। यद्यपि यो प्राप्त गर्न तपाईले सही छनौट गर्नुपर्दछ एनाबोलिक स्टेरोइड्स (एएएस) तपाइँले चाहानु भएको पूरा गर्न।
हामीले सुझावहरू र हाम्रो शीर्ष सिफारिसहरूले भरिएका यो क्रेता मार्गनिर्देशक सिर्जना गर्‍यौं तपाईंलाई उत्तम छनौट गर्न मद्दत गर्न एनाबोलिक स्टेरोइड (AAS) कच्चा माल.
तातो बिक्री स्टेरियोड्स कच्चे सामाग्री सबैभन्दा लोकप्रिय इंजेक्ट स्टेरियोड्स कच्चे सामाग्री सर्वश्रेष्ठ मौखिक स्टेरोइड कच्चा माल
टेस्टोस्टेरोन ईनाथेट / टेस्ट ई
दर्जा:★★★★★ Trenbolone एसीटेट / Tren Ace / Tren A
दर्जा:★★★★★ मेथन्ड्रोस्टेनोलोन / डियानाबोल / Dbol
पछिल्ला बर्षहरूमा हामीबाट सब भन्दा ठूलो बिक्री स्टेरोइड कच्चा माल
सब भन्दा सजिलो पेय पदार्थ र सस्तो स्टेरोइड कच्चा माल
Trenbolone Acetate Trenbolone Enanthate भन्दा मजबूत छ Enanthet एस्टरले यौगिकमा अधिक मास लिने कारण।
अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू पहिलो पटक Trenbolone हर्मोनको साथ जाने Trenbolone Acetate हो।
Dianabol जन निर्माण को लागी धेरै फाइदाजनक हुन सक्छ।
Dianabol को प्रभाव एक पटक स्टेरोइडको तुलनामा बन्द गरीयो प्रयोग मा पकड गर्न सजिलो छ।
यहाँ छन् शीर्ष 10 लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइड कच्चा:
सबैभन्दा लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरॉइड नामहरू
सब भन्दा लोकप्रिय स्टेरोइड विकल्प हो:
Dianabol पाउडर (methandrostenolone)
डेका डुराबोलिन (नान्ड्रोलोन डेकानोटे पाउडर)
इक्विपोइसेमेटेरियल (बोल्डनोन अण्डकोनोएट कच्चा)
सब भन्दा प्रभावकारी एनाबोलिक स्टेरोइड नामहरू
प्रयोगकर्ता रेटिंगबाट, सब भन्दा प्रभावकारी स्टेरोइडहरू:
त्यहाँ anabolic स्टेरोइड छनौट गर्न को लागी हेर्नका लागि केहि आवश्यक निर्दिष्टहरू छन्। तपाईं आफ्नै लागि उत्तम एउटा छनौट गर्न विभिन्न उद्देश्यहरूको तुलना गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यका लागि बिभिन्न प्रकारहरू छनौट गर्दछन्।
मांसपेशिको निर्माणको लागि बल्क स्टेरोइडहरू
प्रदर्शन स्टेरोइड शक्ति र सहनशीलता को लागी
बर्षे बोसो को लागी स्टेरोइड काट्ने
प्रयोगका अन्य कारणहरूमा उपचार र पुन: प्राप्ति र चयापचयको बृद्धि समावेश छ।
दुबै मेडिकल र गैरकानुनी उद्देश्यका लागि, AAS लिन सकिन्छ:
गोलीहरु छाला अन्तर्गत रोपिएको रूपमा
क्रीम वा जेल को रूपमा छाला को माध्यम बाट
मौखिक रूपहरू मुखले लिन्छन्। तिनीहरू समावेश:
मेस्टरोलोन (प्रोवरन पाउडर)
मेथान्डिएन (डियनाबोल पाउडर)
Oxandrolone (अनावर पाउडर)
Oxymetholone (Anadrol पाउडर)
इंजेक्शन योग्य फारमहरू समावेश:
टेस्टोस्टेरोन ईन्थेट पाउडर
Trenbolone Acetate पाउडर
बोल्डेनोन अण्डसाइलेनेट कच्चा माल (इक्स्पोइज)
मेथेनोलोन ईन्थेट पाउडर (प्रिमोबोलन)
Nandrolone decanoate पाउडर (Deca Durabolin)
2019 मा सब भन्दा लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइड तुलना गर्नुहोस्
उत्पादन नाम टेस्टोस्टोर्न ईन्न्थेट पाउडर Dianabol पाउडर Trenbolone Acetate पाउडर अनावर (ओक्सान्ड्रोलोन) पाउडर स्टेनोजोलोल पाउडर मानव विकास हर्मोन कच्चा नन्द्रोलोन डेनोनो पाउडर Boldenone Undecylenate कच्चा Drostanolone प्रोपिओनेट पाउडर Methenolone Enanthate पाउडर
काट्ने ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
बल्काउँदै ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
हाम्रो 10 सबैभन्दा लोकप्रिय एनाबोलिक स्टेरोइड समीक्षा
टेस्टोस्टेरोन मुख्य एनाबोलिक स्टेरॉइड हो जुन वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा तपाइँको शरीर द्वारा उत्पादन गरिन्छ। अब जबकि यो स्टेरोइड स्पष्ट रूपले पुग्न सक्ने मर्दाना मांसपेशिहरु र शक्ति बनाउन मद्दत गर्दछ, यो अन्य पुरुष लक्षणहरूको लागि पनि जिम्मेवार छ जस्तै तपाईको गहिरो आवाज र अनुहारको कपाल। जब प्रदर्शन-बृद्धि गर्ने औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, टेस्टोस्टेरोनले तपाईंको मांसपेशीहरूको आकार र शक्ति वृद्धि गर्न, मांसपेशिको क्षति कम गर्दछ, र मांसपेशि रिकभरी बढाउँदछ।
Trenbolone व्यापक रूपले आज सम्म सृष्टि गरिएको सब भन्दा बलियो anabolic स्टेरोइड को रूपमा मानिन्छ। वास्तवमा, यो 500 बाट 500 को 100 को तुलनामा 100 को एन्ड्रोजेनिक अनुपातको कारण टेस्टोस्टेरोनभन्दा पाँच गुणा बलियो छ। शरीर सौष्ठवहरूको लागि, विशेष गरी, यो एक लोकप्रिय स्टेरोइड मात्र हो किनकि तिनीहरू कती चाँडो मांसपेशिहरु र शक्ति लाभ मा प्याक गर्न सक्छन्। यसले स्वाभाविक भन्दा चाँडो बोसो जलाउन चाहनेलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
3: अनवर (Oxandrolone) पाउडर
4: Nandrolone Decanoate पाउडर
Nandrolone डेकानोनेट प्रदर्शन बढाउने एथलीटहरू मध्ये एक धेरै अधिक प्रयोग हुने anabolic स्टेरोइड हो। यो एक धेरै लाभदायक अफ सीजन मास स्टेरोइडको लागि राम्रो गरी परिचित छ, तर यो यसको उपचारात्मक लाभहरूको लागि धेरै एथलेटिक सर्कलहरूमा पनि मनपर्ने हो। यसको जटिल उपचारात्मक फाइदाहरूको कारण, Nandrolone हर्मोन चिकित्सा अभ्यासमा सबैभन्दा फाइदाजनक anabolic स्टेरोइड हो।
5: Boldenone Undecylenate कच्चा
Boldenone Undecylenate एक टेस्टोस्टेरोन व्युत्पन्न एनाबोलिक androgenic स्टेरॉइड हो र संरचनात्मक हिसाबले टेस्टोस्टेरोन को रूप परिवर्तन। यो कार्बन एक र दुई स्थानमा थपेको डबल बन्डमा एक धेरै हल्का परिवर्तन हो। Undecylenate एस्टर बोल्डनोन मा लगभग 3-4 दिन इंजेक्शन पछि शिखर रिलीज को लागी, 21 दिन को लागी अनुसरण गर्न हार्मोनको एक ढिलो निरन्तर जारी संग।
6: Dianabol पाउडर
Dianabol एक सबै भन्दा लोकप्रिय को एक र सबै भन्दा महत्वपूर्ण anabolic स्टेरोइड प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुनै प्रश्न बिना, यो कहिल्यै लोकप्रिय बजार हिट गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय मौखिक स्टेरोइड हो र कुनै पनि रूप मा सबैभन्दा लोकप्रिय स्टेरोइड्स मध्ये एक हो। जहाँ प्राय जसो मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा फेला पर्दछ, Dianabol एक इंजेक्शन समाधानको रूपमा फेला पार्न सकिन्छ, तर ट्याब्लेटहरू प्रशासनको प्राथमिक मार्ग प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जबकि एक अधिक प्रसिद्ध anabolic स्टेरोइड को एक, Stanozolol स्टेरोइड जनसंख्या को उपयोग मा धेरै मा धेरै लोकप्रिय छ। यो धेरै मानेहरूमा धेरै हल्का एनाबोलिक स्टेरोइड हो जुन पुरुष र महिलाले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछन्। समान महत्वपूर्ण, यो धेरै प्रदर्शन वृद्धि प्रयासहरूको लागि अत्यधिक प्रभावी साबित भएको छ।
8: मानव विकास हर्मोन कच्चा
9: Drostanolone प्रोपिओनेट पाउडर
बजारमा सबै मास्टरनको बहुमत ड्र्रोस्टोलोन प्रोपियनेट हुनेछ। ड्रोस्टानोलोन प्रोपियनेट एक डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT) व्युत्पन्न एनाबोलिक स्टेरॉइड हो। विशेष रूपमा, मास्टरन DHT हार्मोन हो जुन कार्बन2स्थितिमा मिथाइल समूहको थपेर संरचनात्मक रूपमा परिवर्तन गरिएको छ, यसले हार्मोनलाई एक्सएनयूएमएक्स-हाइड्रोक्सीस्टेराइड डिहाइड्रोजेनिज एन्जाइमले मेटाबोलिक ब्रेकडाउनबाट बचाउँछ, जो कंकाल मांसपेशीमा पाइन्छ। यसले हर्मोनको एनाबोलिक प्रकृति पनि ठूलो पार्दछ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने वा खोज्ने व्यक्तिहरू मध्ये सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एक
अधिक सजावटी शरीरको लागि
10: Methenolone Enanthate पाउडर
मेथेनोलोन ईनन्थेटलाई बजारमा सुरक्षित एनाबोलिक स्टेरोइड्स मध्ये एक मानिन्छ र यसले यो दावी फिर्ता लिनका लागि उत्कृष्ट सुरक्षा मूल्या .्कन गर्दछ। वास्तवमा यो स्टेरोइड कम वजन भएका बच्चाहरू र अकाल शिशुहरूलाई क्षतिविना उपचार गर्न सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ। यो अस्टियोपोरोसिस र सारकोपेनियाको लागि पनि सिफारिस गरिएको छ।
विश्वसनीय एनाबोलिक स्टेरोइड स्रोत खरीद गर्नु अघि विचार गर्नु
विभिन्न प्रकारका स्टेरोइड्सको अनुसन्धान गर्नुहोस्
तपाईं सजिलै स्टेरोइड पाउडर अनलाइन किन्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अज्ञात रूपमा तपाईंको घरमा डेलिभर गर्नुहोस्। जे होस्, तपाइँले स्टेरोइड पाउडर अर्डर गर्नु अघि केहि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। पहिले, पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईं सहि स्टेरोइड पाउडर पाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ जिममा स्टेरोइड पाउडर प्रयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने, उनीहरूले कुनलाई प्रयोग गर्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् र शुरुवातकर्ताहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिहरूको बारेमा सोध्नुहोस्। तपाईं अनलाईन फोरममा अन्य शरीर निर्माणकर्ताहरूको सल्लाहको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ विभिन्न स्टेरोइड पाउडर को समीक्षा पढ्न पनि उपयोगी छ। विशेष रूपमा तपाईले स्टेरोइड पाउडरले कसरी काम गर्ने, कस्तो प्रकारको आहार र व्यायाम कार्यक्रमहरू राम्रोसँग जान्छन् र सम्भावित साइड इफेक्टहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै अवस्थित अवस्था छ भने, विशेष स्टेरोइड पाउडर प्रयोग गरेर सम्भावित डाउनसाइडहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं पछि हुन सक्नुहुन्छ।
विश्वसनीय स्टेरोइड आपूर्तिकर्ता छनौट गर्नुहोस्
चीनमा स्टेरोइड पाउडर उत्पादनको लागि धेरै कम्पनीहरू छन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं स्टेरोइड पाउडर अनलाइन खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कहिले पनि पूरकहरूको उत्पत्तिको बारेमा निश्चित हुन सक्नुहुन्न। विश्वभरि स्टेरोइड पाउडरको लागि एक विशाल भूमिगत बजार छ र धेरै भूमिगत प्रयोगशालाहरू, विशेष गरी युरोपबाट, तपाईं अवैध अनाबोलिक स्टेरोइड पाउडर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्यको लागि, प्रसिद्ध कम्पनीहरूबाट स्वीकृत स्टेरोइड पाउडर अर्डर गर्नु उत्तम हो।
हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी कम भन्दा कम गर्न सक्दछौं
हाम्रा उत्पादनहरू सीजीएमपी अन्तर्गत उत्पादन गरिन्छ र गुण ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
शुद्धता 98% भन्दा कम ग्यारेन्टी गरिएको छ। सीओए; HPLC; HNMR परीक्षण रिपोर्ट प्रदान गर्न सकिन्छ।
हाम्रो आपूर्ति क्षमता धेरै स्थिर छ र नियमित रूपमा जन उत्पादन अनुसूची।
हामीसँग विश्वभरि उच्च-अन्तका बजारहरू सेवा गर्ने प्रशस्त अनुभव छ।
हाम्रो कारखानासँग सीधा सहयोग गर्नुहोस्, तपाईं आफ्नो लागत कम गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रश्न: तपाइँको कम्पनी बाट अर्डर कसरी राख्ने?
1. तपाइँ तपाइँको खरीद आदेश हाम्रो वेबसाइट मा वा हाम्रो इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ([इमेल सुरक्षित]), एक पटक हामीले प्राप्त गरेको उद्धरण प्रदान गरिनेछ।
2.Payment doneand पार्सल रिसीभर र ठेगाना प्रदान गरियो।
3। सामान ट्र्याकि number नम्बर, प्याकेज तस्वीर, ट्र्याकि number नम्बर र अनुमानित आगमन मिति सहित डेलिभर हुनेछ।
4.देशले प्राप्त गरे र टिप्पणी दिन्छन्।
प्रश्न: तपाईंको कम्पनीले कुन भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्न सक्दछ?
A: बैंक स्थानान्तरण; वेस्टर्न यूनियन; पैसा पठाउने कम्पनी; Bitcoin
प्रश्न: नमूना उपलब्ध छ?
A: हो, प्राय: उत्पादनहरू नि: शुल्क नमूनाको रूपमा पठाउन सकिन्छ, तर तपाईं शिपिंग लागतको लागि भुक्तान गर्नुहुन्छ।
प्रश्न: अर्डरहरू राख्नु अघि उत्पादको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने?
A: COA, HPLC, HNMR उपलब्ध छन्। र तेस्रो पार्टी प्रयोगशालाहरू द्वारा परीक्षण कागजातहरू समय समयमा प्रदान गरिनेछ।
प्रश्न: कसरी मेरो पैसा सुरक्षित ग्यारेन्टी गर्ने?
A: सामानहरू बाहिर पठाउँनु अघि पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ।
A: 1 भित्र -3कार्य दिनहरू भुक्तान पुष्टि भएपछि। (चिनियाँ छुट्टिहरू समावेश गरिएको छैन)।
प्रश्न: के त्यहाँ कुनै छुट छ?
A: हो, ठूलो मात्राको लागि, हामी सँधै राम्रो मूल्यहरूको साथ समर्थन गर्दछौं।
प्रश्न: के तपाईं आपूर्ति उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ?
A: हाम्रो आपूर्ति क्षमता धेरै स्थिर छ र नियमित रूपमा जन उत्पादन अनुसूचित।